Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola lase-Argentina Ama-Angel Correa Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
Ukuqala, ubizwa ngokuthi "Ingelosi encane“. I-athikili yethu ikunikeza ngemininingwane ephelele ye-Angel Correa Childhood Indaba, i-Biography, amaqiniso womndeni, abazali, ukuPhila kwasekuqaleni kanye neminye imicimbi ephambili kusukela lapho ayeseyingane kuya lapho ethandwa.
Impilo nokuvuka kwe-Angel Correa. Ama-Credits Ama-Image: I-Pasionfutbol ne-Goal.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngendima yakhe ehlaselayo- lelo khono elihle, ijubane kanye nendawo ephansi yokudonsela phansi. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka inguqulo yethu ye-Angel Correa's Biography ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Indaba Yengane ye-Angel Correa- Impilo Yakhe Esemncane Nangemuva Lomndeni Wakhe
Ukuqala, U-Ángel Martín Correa Martínez wazalwa ngosuku lwe-9 kuMashi 1995 edolobheni laseRosario e-Argentina lapho izinkanyezi zithanda khona Lionel Messi, UMauro Icardi futhi Angel Di Maria nesichotho kusuka. ICorrea ngomunye wabantwana abaningi abazalwa ngunina omncane owaziwa kakhulu futhi kuyise okwaziwa kancane ngaye. Ngezansi isithombe esingavamile somunye wabazali baka-Angel Correa- umamakhe.
Hlangana nomunye wabazali baka-Angel Correa. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ngaphandle kwalokho, kusobala ukuthi ungumuntu wase-Argentina wobuzwe obuxubile onemvelaphi emincane yomndeni eyaziwayo. Ubuwazi ukuthi uCorrea osemncane wakhulela endaweni yaseLas Flores eRosario lapho akhulela khona nezingane zakubo okungaziwa kangako ngaye?
Wakhulela endaweni yaseLas Flores eRosario. Ama-Credits Wezithombe: I-WordAtlas ne-PassionFutbol.
Ukukhula emndenini ophansi wesigaba esiphansi endaweni yaseLos Flores, uCorrea waphila impilo yokuqala yobuphofu bokuhlukumezeka endaweni lapho kwakunethuba eliphezulu lokuthi angagcina ngokuba ngumlutha wezidakamizwa noma owenkantolo.
Indaba Yengane ye-Angel Correa- IMfundo Yakhe Nokwakheka Komsebenzi
Kodwa-ke, iCorrea yakwazi ukuthola indlela yokuphunyuka ebunzimeni obumzungezile ngokungena ebholeni lomgwaqo nangokuzibandakanya emisebenzini eyakha amakilabhu namakilabhu ayo okubafana ngaleso sikhathi - i-Alianza yezemidlalo neTiro.
Ngesikhathi uCorrea eseneminyaka engu-12 ubudala, wahlaselwa izinto ezinyantisa igazi lapho elahlekelwa ubaba wakhe owayemxhasa walandelwa abafowethu ababili. Yize ubuhlungu babukhulu kakhulu ukuthi uCorrea angabubekezelela, wenza lokho ayekwazi ukukwenza kahle kakhulu; ukuthola induduzo ngendlela yebhola.
"Noma nini lapho ngingena emidlalweni yokudlala, ngikhohlwa konke okuyiqiniso okwangehlele futhi ngikujabulela nje ukudlala,"
Indaba Yengane ye-Angel Correa- Impilo Yakhe Yasekuqaleni Yempilo
Ngenhlanhla, iCorrea yayingeyinhle ngokuthola ukuphunyula ngebhola kodwa yayinamakhono amahle ebhola, intuthuko eyabhaliswa ezinhlelweni zentsha yeSan Lorenzo ngo-2007 ngemuva kokutholwa ngomunye wabahlaseli bekilabhu.
Walethwa eSan Lorenzo ngemuva kokutholwa omunye wabahloli bekilabhu. Isikweletu Sezithombe: PassionFutbol.
Kwakungasohlangothini lwase-Argentina lapho uCorrea echitha khona iminyaka emi-4 ehlonipha amakhono akhe nokuqeqeshwa ngomsebenzi owawuzomthatha udlule ezwekazini laseNingizimu Melika. Ukukhuphuka kwakhe ezinhlwini zekilabhu kwaba ku-meteoric ngonyaka ka-2013 lapho enza umsebenzi wakhe wokuqala wale kilabhu wawubiza ngokuthi yiCiclón.
I-Angel Correa Biography- Umgwaqo Wakhe Oya Udumo
Ngemuva konyaka, uCorrea wavuma isivumelwano sokudlulisela nababenabo ngaleso sikhathi uLa Liga owayebambe i-Atlético Madrid. Ngokudabukisayo kwatholakala ukuthi wayenesimila senhliziyo ngenkathi enza ezokwelapha ukuze aqedele ukuyela ohlangothini lwaseSpain.
Udokotela wakhe ohlinzayo wenhliziyo wamsusa emcimbini okwakudala abheke ukuhlanganyela kuwo. Izithombe Credits: I-Twitter ne-PassionFutbol.
Yebo, isimila sisuswe ngempumelelo ngokuhlinzwa, safika ngezindleko lapho uCorrea ephoswa khona umdlalo wamanqamu nowamanqamu weCopa Libertadores neSan Lorenzo. Leyo kwakuyimidlalo ayekade enethemba lokuyidlala ngoba wenza okuningi ukusiza iqembu lakhe ukuthi lifike emidlalweni yamanqamu.
I-Angel Correa Biography- Indaba Yakhe Yokudumo
Lapho uCorrea ekugcineni eseluleme ngokuphelele, wajoyina ngokusemthethweni i-Atlético Madrid ngomhlaka 13 kuDisemba 2014 futhi wasebenza ngendlela yakhe ukuze abe ngomunye weqembu eliya phambili ethembeni eminyakeni embalwa nje.
Bona ukuthi ngubani osebenze indlela yakhe phezulu ukuze abe ngukhiye phambili e-Atlético Madrid. Isikweletu Sezithombe: Marca.
Akatholakali futhi esilela emisebenzini yakhe yamazwe omhlaba neqembu lesizwe lase-Argentina lapho evame ukuqhathaniswa nomuntu ahlala naye USergio Agüero noma ngabe isitayela sakhe sokudlala sifana kakhulu UCarlos Tevez. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Angel Correa Biography- Intombi, Umfazi, kanye noMntwana
Ukuqhubekela phambili empilweni yothando lwaseCorrea, akukaziwa okuningi ngomlando wokuqomisana ngoba akakaze aveze okuningi ngokwenzeka kulowo mnyango. Njengoba kunje, angeke kushiwo ngokusobala ukuthi noma wayenazo izintombi zangesikhathi esedlule futhi akanawo umfazi ngesikhathi sokubhala. Noma kunjalo, ngokusho I-WTFoot, kukhona umlingani oyimfihlo ogama lakhe linguSabrina Di Marzo owaba namahlebezi okuba yi-Angel Correa Girlfriend kanye nonina wendodakazi yakhe.
Njengoba kushiwo ngaphambili, u-Angel ungumzali wendodakazi ethandekayo uLolita azalelwa yona yintombi yakhe noma unkosikazi wakhe. I-akhawunti yakhe ye-Instagram ihlanganiswa nezithombe zika-Lolita okhula ngokushesha futhi ejabule. Yini enye? intombazane enhle iyakuthanda ukuchitha isikhathi nobaba wayo futhi okujabulela ukuba naye.
U-Angel Correa uyayithanda indodakazi yakhe futhi uchitha isikhathi esiningi nayo. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
I-Angel Correa Biography- Imininingwane yomndeni
Lithe ama-geniuse asuka ekhaya ayofuna imali eningi abuyele ekhaya ukuyokwabelana nomndeni wawo. Kungashiwo okufanayo ngo-Angel Correa ongumnakekeli womndeni wakhe. Sikulethela amaqiniso ngamalungu omndeni wakwaCorrea aqala nabazali bakhe.
Mayelana nobaba ka-Ángel Correa: ICorrea ilahlekelwe ngubaba wayo omncane owaziwayo izandla ezibandayo zokufa lapho ineminyaka engu-12. Yize kungakadalulwa lokho okuvezile ukuthi yini edale ukushona kukababa wakhe, umhlonipha umufi ngokumnika inkumbulo yakhe yobuntwana emnandi kunazo zonke ngokumphelezela ukuya ezifundweni.
Mayelana Ángel Correa Umama: Uyazi ukuthi umama omncane waseCorrea owaziwayo ungomunye womama abaningi abakhathalelayo abafakazisile ukuthi ukukhulisa abazali kumayelana nokuzinikela? Usize ukukhulisa phambili kanye nezingane zakubo ngemuva kokushona komyeni wakhe. Eqinisweni, umama kaCorrea akadli aze aqikelele ukuthi izingane zakhe sezanele. Uyaziqhenya ngokukhethekile ngoCorrea othathe izibopho zomondli kusukela aneminyaka eyi-12 ngokunikela ngePer Diem yakhe ukuze kuqhubeke umndeni.
Isithombe esingajwayelekile se-Angel Correa nonina. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana no-Ángel Correa Izelamani: I-phambili inezingane eziningi ezineminyaka eyi-10. Ulahlekelwe ngababili eceleni kukababa wakhe kudala kanti akukho okuningi okwaziwayo ngabaseleyo okukholelwa ukuthi bangabafana. Lokhu kungenxa yokuthi iCorrea ibilokhu ikhuluma ngokunakekela umama nabafowabo ngaphandle kokusho odadewabo ngesikhathi kuqhubeka izingxoxo. Ngezansi kwesikhungo esisondelene nomndeni ka-Angel Correa esisitholile.
U-Angel Correa onomama wakhe kanye nomunye wabafowabo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana nezihlobo zika-Ángel Correa: Kude nempilo yomndeni ka-Angel Correa, akukaziwa okuningi ngozalo kanye nemindeni yomndeni wakhe, ikakhulukazi njengoba kuhlobene nogogo wakhe kanye noyise wezingane zakhe ngenkathi abomalume bakhe, oomalume, abazala bakhe, izingane zomshana wakhe nabazukulu bakhe basazokhonjwa ngesikhathi sokubhala. le bio.
I-Angel Correa Biography- Ama-Life Life Amaqiniso kude nebhola
Njengabo bonke abantu, i-Angel Correa's inezici zobuntu ezichaza ukuthi ungubani ngempela ngaphandle kokudlala. Izici ezabiwe ngumuntu ngamunye eziqondiswa uphawu lwePisces Zodiac zifaka phakathi ukuthambekela okubucayi kokudlula, imvelo eqhutshwa ngokomzwelo nokuqagela okubonakalayo.
UCorrea ongambuleli amaqiniso ngamaqiniso akhe angasese nawomuntu siqu wenza izinto ezimbalwa ezenzelwa izinjongo zakhe nokuzijabulisa. Kuhlanganisa ukudlala imidlalo yamavidiyo, ukuhamba nokuchitha isikhathi esihle nomndeni wakhe nabangane.
Ukudlala imidlalo yevidiyo kungenye yezinto ozijabulisa phambili. Indodakazi yakhe nayo yenza okufanayo kwezokuzilibazisa. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Angel Correa Biography- Amaqiniso Wakhe Wokuphila
Ukhuluma ngemizamo yokwenza imali ka-Angel Correa kanye nemikhuba yakhe yokusebenzisa imali, uhola imali eningi emiholweni, emiholweni, nasekuzuzeni amabhonasi ngokudlala ibhola lezindiza eziphezulu ngenkathi ukuvumelana kudlala indima ebalulekile ekhuphukeni komnotho wakhe okuqhubekayo.
Ngakho-ke, lowo ohola phambili onenani elilinganiselwe lama-dollar angaphezu kwezigidi ezingama-3.50 ngaleso sikhathi sokubhala le bio. Unakho okudingekayo ukuze aphile impilo yobukhazikhazi njengabahola phambili kwezemidlalo abafaka Cristiano Ronaldo, Neymar Jr futhi Paul Pogba.
UCarrea olinganiselwa kuma-dollar ayizigidi ezingama-3 waseCorrea ukhuluma kahle ngobumnandi obunamandla bokudlala ibhola eliphambili. Isikweletu Sezithombe: Pho.to.fun.
I-Angel Correa Biography- Amaqiniso Akhe Ayingqayizivele
Ukuqeda indaba yethu yobuntwana yase-Angel Correa kanye ne-biography, nazi amaqiniso amancane angaziwa noma angaziwa mayelana nalawa phambili.
Ukwehlukaniswa Kweholo: Kusukela ngoSepthemba 2018, inkontileka yakhe yase-Argentina ne-Atlético Madrid yambona ehola umholo Ama-3.5 Million Euro ngonyaka. Ehola umholo ka-Angel Correa ngezinombolo, uhola okulandelayo.
I-Angel Correa Salary Breakdown. Credits: WTFoot
Lapha, sengezelele i-Angel Correa's Salary (izibalo ze-2018) njalo ngeSekhondi.
Lokhu kungakanani imali eyenziwe yi-Angel selokhu ubuke leli khasi.
Uma inombolo engenhla ayikhuphuki, kusho ukuthi ubuka kusukela ku-an Ikhasi le-AMP. Manje Chofoza LAPHA ukubona iholo lika-Angel Correa ngomzuzwana. Uthi bewazi?… Kuzothatha isisebenzi esiphakathi nendawo eYurophu okungenani iminyaka eyi-8.6 ukuthola okufanayo Angel ihola ngenyanga eyi-1.
Inkolo: Abazali baka-Angel Correa bamkhulisa ngokulandela inkolelo yenkolo yobuKristu. Umdlali webhola lezinyawo ungum Katoliki ojwayezayo njengabantu abaningi abazalelwa eRosario e-Argentina. Eqinisweni, waba nokuhlangana noJorge Mario Bergoglio e-Argentina ngaphambi kokuba abe uPapa uFrancis.
U-Angel Correa onokhadinali ngaleso sikhathi uJorge Mario Bergoglio. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ama-tattoos: ICorrea ngokusobala inkulu kuma-tattoos futhi inobuciko bomzimba entanyeni, esifubeni, ezingalweni nasemilenzeni. Akukho ukuphela lapho kungabonwa khona ukuthi zingaki ezinye ubuciko angabunikwa ukuthi isekhona isikhala seminye.
Izilinganiso zeFIFA: Izilinganiso ze-FIFA zika-Angel Correa zizonke zingaphezulu kuka-82 ngesikhathi sokubhala le bio. Yize izilinganiso zingukuthuthuka kweminyaka edlule, abalandeli abakwazi ukulinda ukumbona ethola isilinganiso esingu-87 sombono ngenhloso yokuthola izinsizakalo zakhe ngegeyimu yemidlalo yeFIFA.
Ungakwazi ukwenza izincazelo ukuphuma kuma-tatto akhe. Isikweletu Sezithombe: I-WTFoot.
Ukubhema Nokuphuza: ICorrea ayinikezwa ukubhema futhi ayibonwanga ukuthi iyaphuza. Njengabaninigi abaningi bebhola, ukhathazekile ngempilo yakhe futhi akukho angakwenza ukuyekethisa.
I-Angel Correa Biography- Isizinda Sakhe Solwazi seWiki
Kulesi sigaba sokugcina se-Angel Correa's Biography Amaqiniso, uzothola isisekelo sakhe seWiki. Ukufanekiswa ngezansi, kukusiza ukuthola ulwazi mayelana Ingelosi encane ngendlela emfushane futhi elula.
Angel Correa Igama eligcwele U-Ángel Martín Correa Martínez
Angel Correa Usuku Lokuzalwa Mashi 9, 1995 (wayeneminyaka engama-24 ngaleso sikhathi sokubhala)
Indawo Yokuzalwa Ka-Angel Correa IRosario, e-Argentina
Mayelana Nabazali baka-Angel Correa Ubaba wakhe usephuzile futhi umama wakhe uyaphila (ngesikhathi sokubhala).
Igama leNdodakazi ka-Angel Correa Lolita Correa
Inkolo ka-Angel Correa UbuKristu (UmKatolika oqhuba)
Isilinganiso se-FIFA sika-Angel Correa I-81 enamanani angama-87 (kusukela ngoFebhuwari 2020)
Isidlaliso sika-Angel Correa Ingelosi encane
Igama lentombi ka-Angel Correa's Girl (Rumored) USabrina Di Marzo
Igama likankosikazi ka-Angel Correa (Rumored) USabrina Di Marzo
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Angel Correa yethu Yobuntwana Indatshana ye-Plus Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.